‘हिमालयन ट्राभल मार्ट २०१७’ सुरु  Clickmandu
‘हिमालयन ट्राभल मार्ट २०१७’ सुरु
क्लिकमान्डु २०७४ जेठ १८ गते १९:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । विश्वका ठुला टुर अपरेर्टसहरुको सम्मेलन ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट २०१७’ विहिबार देखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।
आइतवारसम्म संचालन हुने मार्टमा ५३ देशका २ सय ५० भन्दाबढी व्लगर र टुरअपरेटर्सहरु सहभागी भएका छन । जसमा ३५ देशका १ सय ७ जना अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका प्रसिद्ध व्लगर तथा लेखकहरु पनि सहभागी भएका छन ।
विहिबार अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल व्लगर एन्ड मिडिया सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । भने शुक्रबार हिमालयन ट्राभल मार्ट २०१७ को औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीबाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बिहिबारको सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाल हिमालय हेर्न र रमाउने विश्वका पाखरीहरुको लागि विश्वकै हव भएको बताए ।
‘नेपाल धेरै विविधताले भरिएको छ, अझै हिमालयनै नेपालको प्रमुख गन्तव्य हो,’ मन्त्री थापाले भने ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मुख्य आयोजक रहेको मार्ट नेपालका हालसम्मको पहिलो र ठुलो सम्मेलन हो ।
‘नेपाल, गेट वे टु हिमालय’ भन्ने नारालाई साथ दिनका लागि नेपालसहित भारत, भूटान, पाकिस्तान र चीनले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन पाण्डेले बताए ।
उनले यो हिमालय ट्रेललाई विकास र प्रवद्धन गर्नका लागि पाटाले सहयोग गरेको र नेपाल सरकारले त्यसलाई प्रवद्धन गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले हिमालयन ट्राभल मार्टलाई विश्वव्यापी बनाउन संसारभरका व्लगरको सहयोग लिइएको र उनीहरुमार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्रले नयाँ मोड लिने बिश्वास ब्यक्त गरे । पान्डेले नेपाललाई हिमालयको प्रवेशविन्दु बनाउने, नेपालसँग अन्य देशमा जोडिने हिमालयको सम्पूर्ण प्याकेज बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा बेच्ने योजना रहेको समेत जानकारी दिए ।
त्यस्तै पाटाका सिइओ डा. मारियो हार्डीले नेपालले पर्यटनको क्षेत्रवाट निकै फाइदा लिन सक्ने बताए । हार्डीले नेपालले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्व बजारमा लैजान नसकेको भन्दै सरकार र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्वन्धित निकायले मिलेर चाँडोभन्दा चाँडो प्रचारप्रसार र सेल मिसनमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।
हिमालयको रेन्जमा नेपाल सेन्टरमा रहेकोले नेपालले यो क्षेत्रको पर्यटनलाई लिड गर्नुपर्ने पर्यटन बोर्डका पूर्व अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठले बताए । हिमालय क्षेत्रलाई पोलिटिकल नक्साभित्र हेर्न नहुने भन्दै छिमेकी सबै देशले मिलेर यो क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । यो क्षेत्रको विकास भयो भने हिमालय क्षेत्रका सबै जनता र देशको आर्थिक स्थितीमा सुधार हुने र त्यसमा नेपालले लिड गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालमा सन् १९८२ मा पहिलो पटक प्यासिफिक एशिया ट्राभल एसोसिएसन अन्तरराष्ट्रिय (पाटा– अन्तरराष्ट्रिय) ले पहिलो पटक पाटा एडभेन्चर ट्राभल मार्ट संचालन गरेको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०११ मा संचालन भएको थियो । जसमा नेपालमा जम्मा ६ पटक यस्तो कार्यक्रम भएको छ । नेपालबाट टुर अपरेर्टसहरु जहिले पनि विदेशमा जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै यसपटक नेपालमै बायर र सेलरहरुको जमघट राजधानी काठमाडौंमा भएको छ । शनिवार र आइतार बि टु बि बैठकहरु संचालन हुने छन ।
हिमालय मार्टले साहसिक पर्यटनलाई पुर्नपरिभाषित गर्ने र नेपाललाई हिमालय क्षेत्रको प्रवेश मार्गको रुपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन उद्योगको व्यवसायिक प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुने यस मार्टमा खरिदकर्ताको रुपमा वेलायत, भारत, भुटान, मलेसिया, बंगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, रसिया तथा सीआइएस, एसिया र खाडी मुलुकका ठुला टुरअपरेर्टसहरु नेपाल आएका छन ।
‘नेपालमा पहिले यस्तो मार्ट पाटाले गर्ने भएता पनि नेपालले गर्न सकेको थिएन,’नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दिपकराज जोशीले भने । मार्टले नेपाल गन्तव्यमा संसारको उत्कृष्ट हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुने जोशीले बताए ।
अमेरिका : जब खसीबजारमा भेटिन्छन् नेपाली !
सावधान चङ्गा उडाउँदा पार्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्, नत्र…
दशैंपछि ब्याज त बढ्दैन तर बैंकसँग ऋण दिने पैसा चाहीँ हुँदैनः सानिमा बैंकका सीइओ भुवन दाहालको विश्लेषण
जेबिल्स सिइओ लक्ष्मीलाल नकर्मीको कार्यकाल चारवर्षलाई थप
रिचार्जरमा मोबाइल किनेर नबराज उप्रेतीले पाए दशैंको खसी
चन्द्रागिरि केवलकार दशैंभर चल्ने, टिकाको दिन पनि बिहान १० बजेदेखि खुल्ने
संस्थानको खसीबोका सकियो, मंगलबारसम्म च्याङ्ग्रा बिक्री गरिने
भक्तपुरको राधेराधेमा खुल्यो गोर्खा इको प्यानलको मुख्य कार्यालय
सेयर बजारमा प्रवेश गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनोस्
रिज्युममा कस्ता शब्द प्रयोग गर्ने ?
क्लिकमाण्डु डटकम चाणक्य मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित अनलाइन पत्रिका हो ।